Bill Gates နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကွန်ဒုံးများ - အမှား ၄၀၄ လား။ (၂၀၁၃) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ရှိသည်
Bill Gates နှင့် သာ. ကောင်း၏ကွန်ဒုံး: မှားယွင်းနေသည် 404? (2013)
တိုးတက်မှုကိုရပ်တန့်လိုက်ပါတယ် STI ပြန့်ပွားမှုကိုတားဆီးရန်ဆယ်ကျော်သက်ကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုသည်။ ကွန်ဒုံးကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ခြင်းဖြင့်ကွန်ဒုံးကိုပိုသုံးရင်ကွန်ဒုံးကိုပိုသုံးမယ်ဆိုတာဘီလ်ဂိတ်ကယုံကြည်တယ်။ ဒီအဆုံးရန်, "သူ့အုတ်မြစ် တစ်ဦး $ 100,000 ထောက်ပံ့ငွေကိုပေးမည် 'ပျော်ရွှင်မှုကိုတိုးမြှင့်ခံစားရန်ခံစားမိသည်' ဟူသောကွန်ဒုံးလုပ်ရန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအစီအစဉ်များရှိသူမည်သူမဆိုအားပေးရမည်။ ” ကန ဦး ဒေါ်လာ ၁၀၀K အပြီးတွင်ထောက်ပံ့သူ ၈၀ ယောက်စီသည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀,၀၀၀ အထိထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်ထားနိုင်သည်။
အကယ်၍ အီသာများတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကွန်ဒုံးတစ်ခုအတွက်အသေးစိတ်အစီအစဉ်တစ်ခုရှိပါကဤနဂါးမုန်လာဥသည်၎င်းကိုရုပ်ပစ္စည်းများအဖြစ်သို့ဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။ သို့သော် ...
ကွန်ဒုံးတိုးမြှင့်ခြင်းသည်ကွန်ဒုံးလိုက်နာမှုကိုတိုးမြှင့်ရန်များစွာမလွယ်ကူပါ။ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုမကြာခဏယုတ္တိနည်းအရ“ ပိုမိုပွတ်တိုက်ခြင်းနှင့် erotica = ပိုမိုကောင်းမွန်သောလိင်ဆက်ဆံမှု” ဟူသောအသုံးအနှုန်းဖြင့်ပွတ်တိုက်မှုသည်ပြtheနာဟုတ်မဟုတ်မေးခွန်းထုတ်ရန်ထူးဆန်းနေပုံရသည်။ Duh!
သို့သျောလညျးဤပုံသေနည်းနှေးကွေးကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှု၏သော့ချက်ဒြပ်စင်လျစ်လျူရှုကြောင်းနိမိတျဆိုးအချက်ပြမှုများရှိပါသည်: လိင်မှုဆိုင်ရာအပျော်အပါးအလွန်လှုံ့ဆော်မှု၏မျက်နှာကိုကျဆင်းများအတွက်သဘာဝအ propensity ။ Paradoxically, overstimulation ၏ဆိုးကျိုးများနည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်ပြသ:
မကြာသေးမီကလူကြိုက်များဘလော့ဂါအင်ဒရူး Sullivan က တစ်ခုကပ်ရောဂါရည်ညွှန်း floppy Dick နှင့်အတူလူငယ်များ။ ၏ စိတ်မချရသောစိုက်ထူမှုများသည်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုရန်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ သင်၏သို့မဟုတ်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည်သင်၏ယောကျာ်းဘဝကိုကွန်ဒုံးဖြင့်ကျေးဇူးတင်ရန်အချိန်ရောက်သောအခါ ပို၍ ပျော့ပျောင်းသောအရာကဘာလဲ။
A 2002 လေ့လာချက် ငယ်ရွယ်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုသူ 32% လုံခြုံအသုံးပြုမှုအတွက်ရရှိလာတဲ့စိုက်ထူပြဿနာများရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အားဖြင့် 2006ကြောင်းပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များ (အခမဲ့, streaming ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများ) ၏အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ကြမှပေါ်လာ .Given, အရေအတွက်ကို 37% အထိဖြစ်ခဲ့သည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများသတင်းပို့ယောက်ျားတွေနှင့်ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များမှသာ 2006 ကတည်းကသညျထတဦးတည်းဒုက္ခရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းငယ်ရွယ်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုသူများသည်အဘယ်သို့ရာခိုင်နှုန်းတွေးမိဖို့ရှိပါတယ် ယခု?
အပျော်အပါးမှလျော့နည်း sensitivity ကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ဦးနှောက်ကသဘာဝတုံ့ပြန်မှု သိပ်ဆွရန်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ sensitivity ကိုအတွက်ကျဆင်းမှုတဖြည်းဖြည်းဖြစ်တယ်, လူတိုင်းမညီအမျှထိခိုက်နစ်နာဖြစ်ပါတယ်။ နေသောသူများသည်, သို့သော်, ထှတျအထိပျအောင်မြင်ရန်ပိုမိုပြင်းထန်သောဆွဘို့အဖမ်းပြီး (သို့မဟုတ်ရှည်လျားသော) ကိုလေ့ရှိပါတယ်။ တဦးတည်းကောင်လေးကလည်း,
ငါ့ရည်းစားဟောင်း ငါလိင်စဉ်အတွင်းဝေးကွာသောထင်ရှားဘယ်လိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ ငါ Over-နှိုးဆွပေးနိုင်အောင်ဖြစ်မိသောကြောင့်ငါသူမတစ်ဦး [transwoman] အဘို့, သူမ၏ခြေနှင့် juggling မြင်းချွတ်နို့စို့နှင့် rimming ခံရဖို့လိုအပ်ပါပြီမယ်လို့ [အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့်] ငါသူမ၏လိင်ကိုစိတ်ဝင်စားမဟုတ်ခဲ့လို့မဟုတ်ခဲ့ရှင်းပြခဲ့ပေမယ့် ငါ့ကိုသူမနှင့်အတူလိင်စဉ်အတွင်းနှိုးဆွပေးခံရဖို့။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြသူအညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအရာပေါင်းများစွာတစ် 2012 စစ်တမ်းဤတုံ့ပြန်မှုစဉ်းစားပါ။ မည်မျှ ED, preference ကို၏ကျားမနှင့်အတူလိင်အတွက်စိတ်မ, ဒါမှမဟုတ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း / အခက်အခဲလိင်ဆက်ဆံမှုစဉ်အတွင်း orgasming ကြုံနေရခဲ့ကြသည်သတိပြုပါ။ တစ်ဦးကဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါ 44 ရာခိုင်နှုန်းကိုတွေ့ကြုံခဲ့ကြ လိင်အင်္ဂါ sensitivity ကိုသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးလျော့နည်းသွားသည်။ ထိုသို့သောယောက်ျားတွေမဆိုမျိုးကွန်ဒုံးကြိုဆိုမျှော်လင့်ထားရန်လက်တွေ့ကျကျလား? (ပုံချဲ့ဖို့ကိုနှိပ်ပါ။ )
စကားမစပ် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကသူတို့၏အရသာများသည် ဆက်လက်၍ အသုံးပြုမှုနှင့်အတူ“ အလွန်အမင်း” တိုးများလာကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ အချို့သည်စိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးခံရသည်၊
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျော်အပါးအားကျဆင်းခြင်း၏ဘုံရလဒ်တစ်ခုမှာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုခံစားချက်လျော့နည်းခြင်း၊ ဦး နှောက်ကပိုပိုပြီးလိုချင်တယ်။ တကယ်တော့မြင့်မားသောလှုံ့ဆော်မှုသည်နေ့စဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျော်အပါးကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းလောက်အောင်တုန့်ပြန်သော ဦး နှောက်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်ဟုခံစားရသောကြောင့်အချို့သောသူများသည်ရဲရင့်သောလိင်ဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်မှုများကိုရှာဖွေကြသည်။ ပိုမိုအစွန်းရောက်သော porn သည်မလုံလောက်ပါ။
အန္တရာယ်နှင့်အသစ်အဆန်းသည် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်အစီအစဉ်တွင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်ပျော်စရာကောင်းသောအာရုံကြောဓာတုပစ္စည်းများထုတ်လွှတ်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်နောက်ပိုင်းတွင်အပျော်အပါး၊ အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးပွားလာခြင်းနှင့်ထပ်မံမြင့်တက်လာသည့်သံသရာများထပ်မံကျဆင်းလာခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ကျွမ်းကျင်သူများကလှုံ့ဆော်ခြင်းကို“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်း” ဟုခေါ်ဆိုသည်။ အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါ မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု အဆိုပါ riskiest လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုသတင်းပို့သောသူတို့အားလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံ-ရှာထဲမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းသည်တသမတ်တည်းရှိခြင်းနှင့်လူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်သိသာစွာဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ လူငယ်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် STI နှင့်ဆက်စပ်သောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုအထူးအကဲဖြတ်သည့်အခြားလေ့လာမှုများကထိုအပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းများအကြားခိုင်မာသောဆက်နွယ်မှုရှိသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
စွန့်စားလိင်: threesomes နှင့်အတူ (ဈ) အတှေ့အကွုံ; (ii) တစ်ဦးတူညီလိင်လက်တွဲဖော်နှင့်အတူလိင်; နှင့် (iii) တစ်ဖက်နှင့်အတူစစ်မှန်သောဘဝလိင်အွန်လိုင်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး;
မိတ်ဖက်အတွေ့အကြုံ: (နှစ်အတွင်း) ပထမဦးဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုမှာ (ဈ) အသက်အရွယ်, (ii) တညဥ့်ရပ်တည်ချက်တွေနဲ့အတွေ့အကြုံကို; နှင့် (iii) ကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်၏တစ်သက်တာနံပါတ် (1 = 1 မိတ်ဖက်;7= 20 + မိတ်ဖက်) ။
အရောင်းအဝယ်လိင်: (ဈ) အစဉ်အဆက်ပေးဆောင်ခဲ့ / လိင်များအတွက်ပေးဆောင် (ပိုက်ဆံဒါမှမဟုတ်မျိုးအတွက်) ။
ကံမကောင်းစွာပဲအာရုံ-ရှာထဲမှာချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားလူမျိုးထက် သာ. ဆွတစ်ဦးပိုမိုအားကောင်းပြင်ဆင်ချက်အဘို့ရှာကြသည် မည်သည့် ကွန်ဒုံးပေးနိုင်ပါသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းမှဖြစ်ပေါ်လာသောမဆင်မခြင်ပြုမှုသည်လိင်တူချစ်သူအသိုင်းအဝိုင်းတွင်“ ရှင်းလင်းသောကျောထောက်နောက်ခံပြုခြင်း” (အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှု) သည်များသောအားဖြင့်ကူးစက်နိုင်သည့်အန္တရာယ်များရှိသော်လည်းလူသိများသည်။ အထက်တွင်ကိုးကားဖော်ပြခဲ့သည့်ဂိတ်စ်က“ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီအသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ကွန်ဒုံးနှင့်ပတ်သက်သောဗဟုသုတများစွာရှိသော်လည်း လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားတွေ၏ 50 ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ကိုမသုံးပါလိင်တူချစ်သူအမျိုးသားများအကြားအိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီနှုန်းမှာမြင့်တက်လျက်ရှိသည်။ …ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးစင်တာ၏အဆိုအရ, 2010 ခုနှစ်တွင်, HIV ပိုးကူးစက်မှု၏ 63 ရာခိုင်နှုန်းလိင်တူဆက်ဆံကြသူယောက်ျား။ "
လိင်စိတ်ခံစားမှုရှာဖွေခြင်းသည် floppy dick ကပ်ရောဂါနှင့်ဆက်နွှယ်ပြီးလိင်တူချစ်သူအသိုင်းအဝိုင်းတွင်သာမကဘဲ။ ဟုပြောသည် Sullivan ၏ဘလော့ဂ်တွင်မှတ်ချက်ပေးနေသောလူတစ်ယောက်:
ကျွန်မအတွေ့အကြုံကနေသင်ပြောပြနိုင် - ဖြောင့်လက်တဆုပ်စာရှိပါတယ်သူတို့အပေါ်မှီခိုခဲ့သူတစ်ဦး 33 နှစ်အရွယ်လူထဲကကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံး tablet ကိုပေးထားခဲ့တဲ့ခုနစ်နှစ်များအတွက် Viagra အပေါ်န့်သူတစ်ဦး 30 နှစ်အရွယ်လိင်တူချစ်သူလူကို, အဖြစ် နှင့် "ကွန်ဒုံးနှင့်အတူခက်ခဲနေဖို့မနိုင်" သူလိင်တူချစ်သူသူငယ်ချင်းသူတို့၏အစောပိုင်း 20s အတွက်ပညာရေးကိုတိုက်တဲ့သူယောက်ျားတွေသိတယ်, ဒါကြောင့်တစ်စုံတစ်ဦး၏မျက်နှာပေါ်တွင်ဖွင့်ဆိုပါကသာလာနိုငျတဲ့သူယောက်ျားတွေသိတယ် - ဒီရက်လူပျိုတို့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုခုရှိတယ်။
ကွန်ဒုံးအသစ်သည် penile sensation ကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်၊ သို့သော်ယနေ့လုံခြုံစိတ်ချရသောလိင်စိန်ခေါ်မှုအများစုသည် ဦး နှောက်၏ software တွင်ကောင်းစွာရှိနေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပျော်ရွှင်မှုအတွေ့အကြုံသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခြေထောက်ကြားတွင်မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏နားကြားတွင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဆုလာဘ် circuit ကိုအလွန်အကျွံတွက်ချက်ခြင်းသည်အပျော်အပါးနှင့်နောက်ဆက်တွဲအာရုံခံစားမှုရှာဖွေမှုတို့၏နောက်ကွယ်တွင်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်အင်္ဂါအပေါ်ပွတ်တိုက်အားတိုးမြှင့်ခြင်းသည်မလုံလောက်ပါ။
ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးကင်းလုံခြုံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ချင်တယ်ဆိုရင်ပျော်မွေ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sensitivity ကိုတက် ratchet ဖို့ဘယ်လိုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားသတိပေးရန်ရှိသည်လိမ့်မည်။ အပျော်အပါးမှပုံမှန် sensitivity ကိုပြန်ကောင်းသည်အထိပြင်းထန်သောဆွချွတ် Lay: ဒီတစ်မျှမျှတတရိုးရှင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်ထွက်လှည့်။ ဒါဟာလပေါင်းများစွာကြာနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သတငျးကောငျးဦးနှောက်ပလပ်စတစ်ဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းငယ်ရွယ်ကောင်လေးကလည်း,
ငါကဒါကိုညစ်ညမ်းတဲ့အထိဖြစ်အောင်လုပ်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး၊ ထင်ပြီးဘာသာရေးအလေ့အကျင့်တွေမဟုတ်တဲ့ယောက်ျားတွေကိုငါထင်ခဲ့တယ်။ ငါကထူးဆန်းတာဖြစ်ရင်လိင်ကပိုကောင်းတယ်၊ ငါနေသမျှကာလပတ်လုံး / လိုချင်တာကြာရှည်နိုင်ပါတယ်, ငါကွန်ဒုံးနှင့်ပင်လိင်ပျော်မွေ့။ ငါ session တစ်ခုတိုင်းကြမ်းတမ်းခေါက်, ဆို့, smacking, f-k session တစ်ခုလုပ်ဖို့မလိုပါ။
သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည် Lay ၏အာလူးကြော်ဖြစ်လာသည့် ဦး နှောက်အတွက်ပျင်းစရာကောင်းသကဲ့သို့ က de rigueur, ဦးနှောက်အပျြောအပါးမှ numbed နေစဉ်နေ့တိုင်းလိင် uninspiring ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးအဘို့, ဒီစောင့်ကြည့် TEDx ဟောပြောပွဲ စိတ်ပညာရှင်ဒေါက်ဂလပ် Lisle စာရေးသူအားဖြင့် အဆိုပါပျော်ရွှင်မှု Trap.
သင်ဦးနှောက်လည်ပတ်ပုံကိုနားလည်ပြီးတာနဲ့ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးမြှင့်တင်ရန်နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်ကွောငျးထငျရှားဖြစ်လာသည်။ Option ကိုတစ်: သင်ဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုနှင့်တက် ratchet ပြင်းထန်သောမကျေနပ်မှု၏ခံစားချက်များကို (မတရားသော) ထပ်တလဲလဲများ၏အန္တရာယ်ကို run နိုင်ပါတယ်။ Option ကိုနှစ်: သင်ဟာယခုပြီးတော့ horniness တစ်နည်းနည်းနှင့်အတူအသက်ရှင်ဖို့သင်ယူခြင်းအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးမှသင့်ဦးနှောက်၏ sensitivity ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီသင်တန်း၏အားသာချက်နေ့စဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအဖြစ်ပျြောမှေ့စမှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့လုံလောက်တဲ့အာရုံပြင်ဆင်ဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။
အီဗိုလူးရှင်း၏ရှည်လျားသောသင်တန်းကျော်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမကြာခဏ Option ကိုနှစ်ဦးဆီသို့ကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းပါပြီ။ အိမ်ထောင်ဖက်၏ရှားပါးမှုကြောင့်ခက်ခဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ overconsume မှဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ (အသေးစိတ်များအတွက်, ဒီကြည့်ရှု စာရေးသူနှင့်အတူအင်တာဗျူး of mean Gene UCLA ရဲ့ဇီဝဗေဒပါမောက္ခဂျေး Phelan နှင့်တယ်ရီ Burnham ပါရဂူဘွဲ့အားဖြင့်။ )
သို့သော်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်သည် Option One သို့ ဦး တည်သွားစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်ရှားပါးသည့်အခြေအနေများတွင်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာပြီးလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်အထွတ်အထိပ်ကိုနှစ်သက်သောကြောင့်၎င်းသည်ကာလတိုအတွင်း၌ပင်“ ခံစား” သည်။ သို့သော်အလွန်အကျွံခန့်မှန်းခြင်း၏ရလဒ်များသည်တဖြည်းဖြည်း ဦး ဆောင်နေသည် နည်းသော အများကြီးငယ်ရွယ်ယောက်ျားတွေများအတွက်လိင်ကိစ္စအပျြောအပါး, ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှု chancy အောင်။
လိင်မှုဆိုင်ရာမရပ်မနားလိင်စိတ်နိုးထမှု၏အန္တာရာယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းသည် ဦး နှောက်၏သဘာ ၀ သဘောထားကိုနာတာရှည်အလွန်အကျွံလှုံ့ဆော်မှုကိုတုန့်ပြန်ရန်လျစ်လျူရှုထားသည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် "ပိုမိုနှိုးဆွခြင်း = ပျော်ရွှင်မှုပိုသော" ဖော်မြူလာသည်ကံမကောင်းစွာဖြင့်အာရုံကြောသိပ္ပံပညာ၏အကောင်းမြင်မှုဖြစ်သည်။ ကသိကအောက်ဖြစ်ရပ်။
ဂိတ်စ်၏လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်မှာမြင့်မြတ်၏။ ယခုသူသည်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းကိုလှမ်း။ လိင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုကိုအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှု၏ရေရှည်ဇီဝကမ္မအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပစ်မှတ်ထားသည့်သုတေသနကိုရန်ပုံငွေရန်သူ၏ buddy Warren Buffet ကိုရယူရန်လိုအပ်သည်။ ထို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိသည်။ ရေရှည်တည်တံ့သောလိင်အပျော်အပါးကိုမည်သို့တွေ့ကြုံခံစားရမည်ကိုလူအများပိုမိုလေ့လာလိမ့်မည်။ ကွန်ဒုံးများသည်လိင်အပျော်အပါးကိုအနည်းငယ်သာတားဆီးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်“ floppy dick epidem” သည်မှတ်ဥာဏ်မကောင်းပေ။
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်တွင်လိင်မှုကိစ္စစတင်အစပြုခဲ့ချိန်၌ကျွန်ုပ်၏မီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကကျွန်ုပ်အတွက် spermicide (ကျွန်ုပ်အတွက်) နှင့်ကွန်ဒုံး (သူအတွက်) ပေါင်းစပ်မှုအပေါ်မှီခိုရန်ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ ငါသူ့ကိုမေးတဲ့အခါ“ ငါ့ကောင်မလေးအတွက်ဒါကပျော်စရာကောင်းမှာလား” သူက "မင်းအတွက်သူ့ကိုဝတ်မယ်ဆိုရင်ဒါပဲ" လို့ပြောခဲ့တယ်။ သူမှန်ခဲ့တယ်
လိင်အပျော်အပါးသည်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်လက်ခံသကဲ့သို့အောင်မြင်ရန်ခက်ခဲရန်မလိုအပ်ပါ။ ဦး နှောက်ကိုစဉ်းစားပါ၊ ကွန်ဒုံးမဟုတ်ပါ။